Soo dejisan Auslogics Disk Defrag 7 – Vessoft
Soo dejisan Auslogics Disk Defrag
Auslogics Disk Defrag – software ku haboon in ay tayadoodii iyo hagaajinta xasiloonida nidaamka. Auslogics Disk Defrag u ogolaanaya in ay defragment ka cajaladaha adag, maareeyaan files iyo in la isu geeyo meel bannaan oo lacag la’aan ah ku disk ah. Software ka kooban yahay shaqada si aad u bilowdo shaqo ku jadwal kuu ogolaanaya inaad si ay u qabtaan defragmentation disk ah waqti cayiman. Auslogics Disk Defrag u saamaxaaya in ay abuuraan warbixin macluumaad faahfaahsan oo shaqada toogasho.
Defragmentation ee drives adag
Ayna ka mid ah nidaamka file
Isticmaalka yar ee khayraadka nidaamka
Auslogics Disk Defrag Software la xiriira:
AOMEI Partition Assistant 6 Standard, Professional iyo Lite
العربية, English, Українська, Français... Ashampoo Burning Studio FREE 1.14.5
العربية, English, Українська, Français... DVD Shrink 3.2.0.15
Saxannada Software waxaa loogu talagalay in la abuuro gurmad ah ee DVD. Sidoo kale software taageertaa qalab gaar ah si ay decrypt nuqul ilaaliyo faylasha.
Saxannada Qalab si aad u hubiso ka cajalladaha iyo sanamyadii disc u Madaxweyne Siilaanyo ku 360. software wuxuu taageeraa hab toos ah oo ka mid ah baadi-sixida images disk ka dib tallaalka ee ilaalintooda.
AOMEI Backupper 3.5 Standard iyo Professional
Saxannada Easy in ay isticmaalaan qalab loogu talagalay soo kabashada xogta. Software ayaa kuu ogolaanaya in ay gurmad, soo celiyo drives adag iyo faylasha.
English, Français, Deutsch, 中文... DAEMON Tools Lite 10.3.0.0152
English, Українська, Français, Español... Wise Disk Cleaner 9.31 Standard iyo Portable
العربية, English, Українська, Français... DriverUpdaterPro 10.1.18
Wadayaasha Tool in ay la shaqeeyaan Darawaliinta qalabka gudaha iyo dibadda ee kombiyuutarka. Software ayaa si toos ah lafaguraa habka darawalka ugu diyaar u ah in dayactir kooban.
Antiviruses Tool in aad computer ka furin oo fayrusyada ee noocyada kala duwan ilaaliyo. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad baarista nidaamka iyo meesha faylasha cudurka ee karantiil.
English, Українська, Français, Español... Router Keygen 1.1
Qabashada Screen Software qabsatay video ka screen iyo tiriyaa FPS ah. Sidoo kale software waxaa si weyn u isticmaala isagana xirfadeed.
Streaming video Qabashada Screen Software baahisaa waxyaabaha video internetka ah. Software wuxuu taageeraa warbaahinta ee video hoorto ka shaashadda kombiyuutarka iyo kamaradaha adeegyada video caan ah.